तिथि मेरो पत्रु » महिला एक वैवाहिक मा के चाहन्छौ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 22 2020 |2मिनेट पढ्न
एक अनुसार अध्ययन सञ्चालन 2012, 41% पहिलो विवाह, 60% दोस्रो विवाह र 73% सम्बन्ध विच्छेद मा संयुक्त राज्य अमेरिका अन्त मा तेस्रो विवाह. यी साँच्चै भयावह संख्या हो र अमेरिकी पुरुष र महिला साँच्चै बलियो सम्बन्ध छ लागि संघर्ष गर्दै छन् देखाउन. सम्बन्ध बलियो हुन लागि, दुवै साझेदार पूर्ण एकअर्काको आवश्यकता बुझ्न आवश्यक. त्यसैले, यहाँ महिला सम्बन्धमा खोज्न केही कुराहरू छन्.
प्रेम: तपाईं एक प्रेम खोज्न एक महिला हुन आवश्यकता छैन सोच हुन सक्छ, तर हामी उल्लेख बिना अगाडि सार्न सक्छ “प्रेम” महिला बस प्रेम महसुस गर्न प्रेम रूपमा. यो एक महिला आफ्नो जीवनमा मानिस नियमित स्नेह सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भन्ने होइन, तर जसरी बारम्बार सकेसम्म कार्यहरू र शब्दहरू माध्यम सजिलै आफ्नी प्रेम चित्रण उहाँलाई चाहनुहुन्छ; स्नेह कहिलेकाहीं सार्वजनिक प्रदर्शन या त खराब छैन. त्यसैले, तिमी एक मान्छे हो भने, शब्द र कामद्वारा उनको प्रेम कति के तपाईं आफ्नो सम्झाएर मा राख्नुपर्छ प्रेम स्त्रीको संग बलियो बन्धन कायम गर्न.
सुरक्षा: जीवन को यात्रा कुनै लागि सजिलो छैन, लिंग को बावजूद, तर महिलाको लागि यात्रा सामान्यतया पनि मुश्किल छ. तिनीहरू लगभग सबै माध्यम ले आफ्नो जीवन विभिन्न सुरक्षाको सामना गर्छन, जो एक ठूलो हिस्सा आफ्नो यौनिकता सम्बन्धित छ.
अमेरिकी महिलाको लागि, यौन शोषण अपरिचित कुरा होइन. एक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व टेलिफोन मुछिएको सर्वेक्षण 612 जुन सञ्चालन वयस्क महिलाहरु, 2000 लगभग सबै तिनीहरूलाई को जीवन मा केहि बिंदु मा सडक दुर्व्यवहार सामना गरेका छन् भन्ने कुरा प्रकट गर्नुभयो. आसपास 87% बीच उमेरको अमेरिकी महिलाहरु को 18 र 64 वर्ष एक पुरुष अपरिचित खुब सताउँथ्यो को अनुभव छ फेला.
हैरान रही यो उच्च संभावना महिला धेरै असुरक्षित छोडेर. त्यसैले, तिनीहरूले पूर्ण भरोसा गर्न सक्छन् एक साथी चाहनुहुन्छ. महिला सिद्ध रक्षक भूमिका निर्वाह र तिनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने साझेदार लागि तीव्र इच्छा.
तपाईं आफ्नो पति वा बनाउने सफल भने मानिसको रूपमा सुरक्षित महसुस, तपाईं चाँडै दुवै यौन र भावनात्मक तपाईं उनको खोलन देख्नेछन्. यो स्वतः नै तपाईं को दुई बन्धन पनि बलियो बनाउन हुनेछ.
Joke: हास्य महिलाहरु को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ. महिला सधैं हास्य अर्थात भावना को एक बिट पुरुषहरूले खोज्न. तिनीहरूलाई हाँस्न बनाउन पुरुषहरूको. एक अनुसार सर्वेक्षण MarketTools इंक द्वारा पूरा, 58% महिला आफ्नो साझेदार हास्य को अर्थमा राख्न चाहनुहुन्छ. त्यसैले, आफ्नो जोडीलाई आनन्दित बनाउने तरिकाहरू र सामाग्री को लागि देख एक मानिसले आफ्नो wittiest सबै भन्दा राम्रो मा हुन प्रयास गर्नुपर्छ.
आदर: हामी पछिल्लो यो उल्लेख भए तापनि, आदर सबै संभावना मा अमेरिकी महिला बहुमत लागि एक सम्बन्धमा छ लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. MarketTools इंक द्वारा सर्वेक्षण प्रकट 84% महिलाको एक सम्बन्ध सफल हुन लागि महसुस, साथी देखि आदर रही धेरै महत्त्वपूर्ण छ.
तपाईं सोच हुनुपर्छ “शारीरिक उपस्थिति बारेमा के”? हो, महिला आकर्षक छन् जो पति र साझेदार छ प्यार, तर उनको लागि यो एक मानिस मा लागि हेर्ने पहिलो गुणहरू को एक कहिल्यै छ.